Qaar ka mid ah dhaawacyadii Hotel Central oo caafimaad dibadda ah loo qaaday – Radio Muqdisho
Dowladda Soomaaliya ayaa saaka caafimaad dibadda ah u qaadey qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada culus ay ka soo gaareen qaraxyadii dhawaan Kooxda Nabaddiidka ah ee Al-Shabaab ay ka geesteen Hotelka Central ee magaalada Muqdisho.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka Ibraahim Guudle Isaaq oo ku sugan Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in caafimaad dibadda ah loo qaaday tiro ka mid ah dhaawacyadii dhawaan ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay Hotel Central ee degmada Xamar weyne.
Wasiirka Caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed ayaa sheegtay in tirada dhaawacyada dalka dibadiisa loo qaadayo ay gaarayaan ilaa iyo 13, kuwaasi oo ay sheegtay in la geynayo xarumo caafimaad oo ku yaalla dalka Isugtaga Imaaraadka Carabta.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Hadliye Cumar oo isna goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in codsiyo ay u gudbisteen dalal kale si adeegyo caafimaad oo dibadda ah loogu qaado tiro kale oo caafimaad dibadda ah u baahan.
Ilaa iyo labo diyaaradood oo laga leeyahay dalka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa lagu qaaday dhaawacya gudaha dalka wax looga qaban waayay.